"EvilQuest" rudzikunuro inotenderera mumashandisirwo emapiros macOS | Ndinobva mac
Isu tese takaedzwa dzimwe nguva kuti tiise pirated kopi yesoftware kuti tirege kuibhadhara. Asi iwe unofanirwa kufunga kaviri, uye dzivisa muyedzo painowoneka. Kutanga iyo kuziva imwe neimwe. Pamberi pechishandiso chega chega pane mazana kana zviuru zvemaawa ebudiriro uye chirongwa, uye hazvina kunaka kusazvibhadhara. Zvimwe zvakananga, kana kushambadzira kunoiswa muapp.
Uye yechipiri ye Seguridad. Iyo ndiyo yakapusa uye yechinyakare nzira yekuvanza nekuparadzira hutachiona. Yakaputirwa mukati mekuisa application, iwe hauzive, iwe unopa mvumo dzose dzinodiwa uchifunga kuti software yauri kuisa inoikumbira, uye kubva ipapo unoenda. Rudzikunuro rutsva runomhanyisa nevanoisa mapirate software. Kune chihwenga.
Vashandisi veMac ikozvino vaoneswa kune nyowani redareware inonzi 'ZvakaipaQuest»Ndeipi inonyora mamwe mafaira emushandisi uye inokonzeresa matambudziko mazhinji kune anoshanda masisitimu. Malwarebytes yawana yakadai rudzikunuro, iyo inogoverwa kuburikidza nepirate maapplication eMacOS.
Kodhi yakaipa yakaonekwa pakutanga mu pirated kopi yeiyo Little Snitch app inowanikwa pane yeRussia foramu ine torrent zvinongedzo. Iko kurodha pasi kunyorera kunouya nePKG yekumisikidza faira, kusiyana neiyo yayo yekutanga vhezheni.
Paunenge uchiongorora iyi PKG faira, Malwarebytes vakaona kuti iko kunyorera kunouya ne "postinstall script", iyo inowanzo shandiswa kuchenesa kumisikidza mushure mekunge maitiro apera. Mune ino kesi, zvakadaro, iyo script inoshandisa malware pane macOS.
Iyo script faira inoteedzerwa kune folda inoenderana neiyo Little Snitch application inonzi CrashReporter, saka mushandisi haazoona kuti iri kumhanya muChiitiko Chekuita sezvo macOS iine yemukati app ine zita rakafanana. Nzvimbo yakatarwa ndeiyi: / Raibhurari / LittleSnitchd / CrashReporter.
Malwarebytes anoti ichave imwe nguva pamberi pe ransomware inotanga kushanda mushure mekunge yaiswa, saka mushandisi haazoibatanidze neyekupedzisira kuiswa chishandiso. Kamwe iyo yakaipa code painogoneswa, inoshandura iyo system uye mushandisi mafaera ane isingazivikanwe encryption.
Rudzikunuro inokumbira iwe $ 50 yekuvhura Mac yako
"EvilQuest" inokumbira iwe madhora makumi mashanu kuti utore mafaira ako.
Chikamu chekunyorera chinokonzeresa kuti Tsvaga isashanda uye iyo system inogara yakaturikwa. Kunyangwe iyo system keychain inoshatiswa, zvichiita kuti zvikone kuwana mapassword uye zvitifiketi zvakachengetwa paMac.Meseji pachiratidziri inoti mushandisi anofanira kubhadhara makumi mashanu emadhora kudzorera mafaera ako, zvikasadaro zvese zvinodzimwa mushure memazuva matatu. Ichokwadi ndechekuti zvinotyisa.
Pachine hapana nzira yekubvisa malware mushure mekunge iwe wakanyora mafaira asina format iyo diski yese, saka vashandisi vanofanirwa kuchengeta-up-to-date backup yezvinhu zvese.
Nzira yakanakisa yekudzivirira mhedzisiro yewareware ndeyekuchengeta yakanaka seti ye backup kopi. Chengeta angangoita maviri mabhakuki eese akakosha data, uye imwe chete haifanire kuchengetwa yakabatana neMac yako nguva dzese. (Rudzikunuro runogona kuyedza kunyorera kana kuora macupuku pane zvakabatana zvinotyaira.)
Kunyangwe rudzikunuro rwungosungirwa chete neakabiwa maapps azvino, Apple inoda kugadzirisa izvi kuchengetedzeka kutyora nekukurumidza sezvazvinogona kuti iyi kodhi yakaipa inogona kuverengerwa mune zvimwe "zviri pamutemo" zvinoshandiswa zvakagoverwa kunze kweApp Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Nyowani "EvilQuest" rudzikunuro inotenderera mumapirati macOS maapp
Nyowani 9-core iMac Intel i10 uye Radeon Pro 5300 inoonekwa paGeekbench